Telemedicine - Proton Kaalifoorniya
Telemedicine oo ku taal Xarunta Kalluunka Kansarka ee Protons
Waxaan fahamsanahay in safarka inta lagu jiro cudurka faafa ee COVID-19 laga yaabo inaysan u fiicnayn dadka qaar. Annaga oo taas maskaxda ku hayna, waxaan hirgelinay ikhtiyaar telemedicine ah si aan u sii wadno bixinta adeegga bukaannadeenna jira iyo suurtagelinta. Markii wadahadal fool-ka-fool ah loogu talogalay bukaan-socodka jira ayaa leh faa'iidooyinkiisa, telemedicine waxay na siisaa dariiq aan kulano bukaannadeenna. ku dhawaad ​​iyo ka wadahadalka in daaweynta proton ay tahay xulashada daaweynta saxda ah.
Telemedicine gebi ahaanba ma beddeleyso baahida bukaanka inay u safraan California Protons si loogu daweeyo, laakiin waxay noo oggolaaneysaa inaan kugula kulanno si aan kuugu sharraxno daaweynta proton ee xaaladdaada gaarka ah, ka jawaabto su'aalaha, oo dib u eegto tallaabooyinka xiga.
Markay tahay waqtigii aan booqan lahayn Xarunteenna, waxaan rabnaa inaan ku xaqiijinno inaan qaadno taxaddar kasta si aan u ilaalinno bukaannadeenna iyo shaqaalaheenna nabadgelyo inta lagu jiro cudurka COVID-19. Waxaad ka akhriyi kartaa waxyaabo dheeraad ah oo ku saabsan talaabooyinkayaga ka hortagga ah annaga Bogga macluumaadka CVEID-19.
Markaad u yeerto Xarunteenna si aad isaga diiwaangeliso bukaan cusub, isku-duwaha rugta caafimaad ayaa kuu soo wici doona si aad u hesho taariikhdaada caafimaad una go'aamiso diiwaannada loo baahan yahay. Isla mar ahaantaana, Kooxdayada Caymiska ayaa qiimeyn doona caymiskaaga gaarka ah waxayna dib-ula eegi doonaan si aad u ogaato ceymiska la heli karo.
Mar alla markii la helo dhammaan diiwaannada caafimaad ee lagama maarmaanka ah, waxaad heli doontaa wicitaan aad ku tashanayso khadka telemedicine. Wada tashigan waxaa loo fududeeyey HIPAA adeegeeda iyo adeegga telemedicine-ka qarsoon. Kahor ballanta telemedicine-ka, qof ayaa wici doona si uu u hubiyo inaad taqaanid sida loo helo adeegga ka hor wakhtigaaga kulanka dhakhtarka.
Si aad u codsato la tashi, waxaad si toos ah noogu soo wici kartaa 858-549-7400, Isniinta ilaa Jimcaha, 8 subaxnimo ilaa 5 galabnimo PST. Ama, waad ka codsan kartaa kooxdeena adigoo buuxinaya Foomka Ballamada Dalbashada.